Palandoken iyo Konakli Ski Center waa kuwo gaar loo leeyahay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari25 Erzurum ReviewXarunta Palandoken iyo Konakli Ski waa qaas ahaan
Xarunta Palandoken iyo Konakli Ski waa qaas ahaan
06 / 05 / 2014 25 Erzurum Review, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, TELPHER
Palandöken iyo Konaklı Ski Center waa kuwo gaar loo leeyahay: Dhismooyinka dhabta ah ee Palandöken iyo Konaklı Ski Center waxaa lagu wareejin doonaa xuquuqaha makhaayadda, wadooyinka la maro, barkadaha iyo qaababka la midka ah iyo hantida kale ee ku xusan aagagga hoos imanaya sharciga iyo aragtida gobolka.
Palandöken iyo Konaklı Ski Center ee Erzurum ayaa la iibin doonaa ka dib marka la wanaajiyo.
Maamulka ku-meelgaadhka ah waxaa ka mid ah xarunta Palandöken Ski Center iyo Konaklı Ski Center marka loo eego baaxadda gaaritaanka. Waxyaabaha aan lala xiriirin ee halkan ku yaal waxaa lala geyn doonaa oo ay weheli doonaan xuquuqaha xukunka gobolka iyo meelaha lagu keydiyo iyo kafateeriyada, jidadka waaweyn, wiishashka, balliyada iyo qaababka kale ee la midka ah iyo hantida kale. Qeybta xiriirka la leh tta Gayrimenkul A.Ş. Si loogu diyaariyo tas-hiilaadka gaar ahaaneed, xarumo baraf oo ay ku jiraan wadooyinka orodka, wiishashka, gondola, wiishashka barafka waxaa laga soo qaadi doonaa hal gacan, 'skipass' iyo kaabayaasha farsamada oo noqon doona nidaamka tigidhada kaliya oo la dhisi doono, nabadgelyo kali ah, goob-badbaadin iyo nidaamyo caafimaad ayaa la dhisi doonaa nidaamkanna waxaa laga maamuli doonaa hal ilo. shaqaalaha farsamada iyo maamulka ayaa loo shaqaaleysiin doonaa mashruuca. Hawlo kala duwan ayaa la fulin doonaa si loo gaaro heerarka caalamiga ah ee xarumaha barafka. Markaa kor u qaadista xarumaha ee dalxiiska qaran iyo kan caalamiga ah ayaa la kordhin doonaa waxaana la bixin doonaa waxqabadyo taageero ah oo loogu talagalay kor u qaadista barafka ee dugsiyada Turkiga. Qeybta gaarka loo leeyahay sidoo kale waxaa lagu dhiiri gelin doonaa inay maal gashadaan maareynta barafka.
Xaaladda guud, howlaha dhaqan celinta ee xarumaha barafka, hagaajinta howlaha (wiishashka, jidadka, burburka barafka, sameynta barafka mashiinka ah, nidaamka tikidhada iyo tas-hiilaadka farsamada iyo hagaajinta gawaarida barafka), hoteellada iyo maqaayadaha, iskoolka barafka, kireysiga barafka, howlaha buuraha, soonaha. Qorshahan ayaa lagu fulin doonaa sedex tiir oo waaweyn, kuwaas oo ah kor u qaadida iibka. Si looga caawiyo Maamulka Maamulka Gaarka ah ee gaar ahaanta xarumaha barafka iyo in la keeno tas-hiilaadka heerarka caalamiga ah, waxaa heshiis la gaarey Xiriiriyaha 'McKinsey-Pas Grau International SA' oo ah lataliye khibrad u leh howlaha maaraynta iyo maaraynta ciyaaraha Olombikada, oo ay weheliso dalxiiska xilliga qaboobaha iyo isboortiga.
In dunida la baro
Dhibaatooyinka kaabayaasha mudnaanta leh ee xarumaha baraf-ka ayaa la filayaa in la dhammaystiro ka hor xilli-barafka xiga. Wax kasta oo ka yimaada panorama 360 panoramic panoramic ilaa qaababka kala duwan ee loo soo bandhigo ayaa loo isticmaali doonaa in lagu dardar geliyo xarumaha. Iyadoo la raacayo dadaallada lagu kordhinayo awoodda maareynta shaqaalaha, dhammaan xarumaha ay ka mid yihiin wiishka cusub, gondola iyo aagga orodka ayaa la gaarsiin doonaa heer caalami. Taageero ayaa laga heli doonaa ururada khabiirada ah ee daraasadahaan. Kadib, si loo kordhiyo baahida Bariga Dhexe, Aasiyada Dhexe ee Turkic Republic, Russia iyo xarumaha Yurub waxay noqon doonaan booqashooyin dhiirrigelin ah.
Shaqada: Farsamooyinka Mechatronics ee Palandöken iyo Konakli Ski
Palandöken iyo Konakli Ski Center waxay u wareejiyeen Dawladda Hoose
8.5 Million Pounds Dayactir Xarumaha Palandöken iyo Konakli Ski
Xiriirka gaadiidka ee baayacmushtarka dhaxalka ah ee Konaklı iyo Palandöken
Jadwalka basaska wuxuu bilaabmay Palandöken iyo Konakli
Feejignaanta Palandöken iyo Konakli
Palandöken iyo Konakli waxay galaan gebi ahaanba gorgortanka
Xilliga Ski iyo tobogaanku waxay ka furan yihiin Xarunta Palandöken Ski Resort
Laba barxad oo qaas ah ayaa loo dhigaa
Dib-u-Celinta Polat-ka oo Furay Xiliga Xiliga Xarunta Palandoken Ski Center (Video)
Xiisadda barafka ee kaymaha ee Palandöken
Ku raaxee Skiing at Kalka Ski Resort ee Palandoken
Xarunta Palandoken Ski-ga waa la gaari doonaa
Xarunta Palandöken Ski Resort waxay diyaar u tahay Christmas-ka
Badbaadinta Dhulka ee Konakli
Goobta Palandoken Ski
Boostada Shaqada: TCDD Nigde Gar Agaasimaha Adeegga Naafada ee Shaqaalaha ah
Gaadiidka TEMde waa talaabo talaabo